DEG DEG:Ciidamada DFS iyo kuwa Ajaaniib ah oo Weerar ku qaaday Al Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada DEG DEG:Ciidamada DFS iyo kuwa Ajaaniib ah oo Weerar ku qaaday Al...
DEG DEG:Ciidamada DFS iyo kuwa Ajaaniib ah oo Weerar ku qaaday Al Shabaab
Muqdisho (Radio Baydhabo)—Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Weerar Xalay Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Dowladda Soomaaliya iyo kuwa kale oo Ajaaniib ah ay ku qaadeen Saldhig Xarakada Al Shabaab ay ku leeyihiin Degaanka Tooratooroow ee Gobolka Sh.Hoose.
Weerarkan oo dhacay Xalay ayaa yimid kadib markii Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ay ka soo daateen Diyaarad Dagaal islamarkaana halkaasi ay iska horimaad Culus kula galeen Dagaal yahano ka tirsan Xarakada Al Shabaab.
Ujeedka Weerarkan ayaa u muuqda mid lagu beegsanayay Saraakiil ka tirsan Xarakada Al Shabaab oo kulan ku la haa Degaanka Tooratooroow ee Gobolka Sh.Hoose.
Weerarkan ayaa halka lagu beegsaday waxaa ku yaalla Saldhiga Boolis oo gacanta ay ku hayaan Xarakada Al Shabaab, waxaana Al Shabaab Saldhigaasi ugu xiran maxaabiis badan.
Laakiin lama shaacin hadii ujeedka Weerarkaasi sidoo kale uu ahaa in lagu soo furto Maxaabiis ay gacanta ku hayaan Xarakada Al Shabaab.
Dhinaca kale, Sarkaal ka tirsan Xarakada Al Shabaab oo la hadlay Warbaahinta Afkooda ku hadasha ayaa sheegay in Dagaal yahanadooda ay iska caabiyeen Weerarkii Xalay lagu soo qaaday.
10-ka Bishii March ee Sanaddan ayaa Weerar kan la mid ah Ciidamada sida gaarka h u tababaran ee Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka waxey ku qaadeen Saldhig Boolis oo Xarakada Al Shabaab ay ku leeyihiin Degaanka Awdheegle ee Gobolka Sh.Hoose halkaasi oo la sheegay in lagu Dilay 10 ka mid ahaa Xarakada Al Shabaab.
Balse Afhayeenka dhanka howlgallada ee Al Shabaab, Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo ka hadlayay Weerarkaasi ayaa gaashanka u daruuray in khasaaro lagu gaarsiiyay Dagal yahano kuwooda ah.
Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay Weerarkan Xalay lagu qaaday Xubno ka tirsan Xarakada Al Shabaab oo ku sugan Degaanka Tooratooroow ee Gobolka Sh.Hoose.
Xafiiska Warqabadka, Baydhabo
DHAGEYSO:-Warka Duhurnimo Radio Baidoa 17-10-2021
DHAGEYSO:-Warka Subaxnimo Radio Baidoa 16-10-2021
DHAGEYSO:-Warka Habenimo Radio Baidoa 15-10-2021
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay Wakiilka Hay’adda FCA
Ciidamada dowladda & kuwa Galmudug oo ku dhawaaday Guriceel
Muuse Biixi oo ka hadlay dadkii ay ka soo musaafuriyeen laas-Caanood
Booliska Mareykanka oo xiray Nin Soomaali ah oo baabuur ku dilay...
Qarax ka dhacay duleedka Boosaaso & khasaaro ka dhashay